ဇွန်, 1913 ။
လူသည် macrocosm တစ် microcosm, သေးသေးလေးထဲမှာဝဠာလား? ဒီတော့လျှင်, ဂြိုလ်များနှင့်မြင်နိုင်သောကြယ်ပွသူ့ကိုအတွင်းကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဘယ်မှာတည်ရှိနေကြသနည်း
စဉ်းစားတွေးခေါ်သူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များနှင့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စကြာ ၀ manာသည်လူတွင်အရိပ်အမြွက်ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပစာတစ်ခုအနေနှင့်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတွင်စကြာ ၀ universeာ၌လက်ချောင်းများ၊ ခြေချောင်းများရှိပြီးခေါင်းပေါ်တွင်မျက်ခုံးများနှင့်ဆံပင်များ ၀ တ်ဆင်ထားသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ စကြာ ၀ universeာသည်လူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏အတိုင်းအတာများအရတည်ဆောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဆိုလိုသည်မှာစကြာ ၀ ofာ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ မိမိအကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်လူ၌တည်၏။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများသည်နေရာကိုဖြည့်တင်းရန်မပြုလုပ်ရ၊ သို့သော်အထွေထွေစီးပွားရေးနှင့်သက်ရောက်မှုတစ်ခုလုံး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ မိုament်းမျက်နှာကြက်၌ရှိသောအသေကောင်များနှင့်အတူတူပင်နိုင်ပါသည်။
တုန်လှုပ်စေသောအလင်းတန်းများနှင့်ကောင်းကင်၌မြဲမြံစွာတောက်နေသော orbs များသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အထွေထွေသက်သာချောင်ချိရေးနှင့်စီးပွါးရေးတို့အရအာကာသကိုယ်ခန္ဓာတွင်စကြဝuniversalာအင်အားစုများကလုပ်ဆောင်သောမီဒီယာဖြစ်သည်။ လိင်အင်္ဂါများ၊ ကျောက်ကပ်၊ သရက်ရွက်၊ ပန်ကရိယ၊ အသည်း၊ နှလုံးနှင့်အဆုတ်စသည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုဂြိုလ်ခုနစ်ခုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ Boehme, Paracelsus, Von Helmont, Swedenborg၊ မီးအတွေးအခေါ်ပညာရှင်နှင့် alchemists စသည့်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဘာသာရေးတို့သည်အချင်းချင်းနှင့်ကိုက်ညီသောအင်္ဂါများနှင့်ဂြိုဟ်များကိုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောစာပေးစာယူများကိုပေးသည်မဟုတ်သော်လည်းအင်္ဂါများနှင့်ဂြိုလ်များအကြားအပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းသဘောတူကြသည်။ စာပေးစာယူရှိကြောင်းသတိပြုမိပြီးနောက်ကျောင်းသားသည် အကယ်၍ သူသည်သိလိုပါလျှင်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်နှင့်မည်သည့်အင်္ဂါဂြိုဟ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်၎င်းတို့မည်သို့ဆက်စပ်သည်နှင့်မည်သို့လည်ပတ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်။ သူကဒီကိစ္စမှာသူတပါးစားပွဲပေါ်မှီခိုလို့မရဘူး။ စာပေးစာယူဇယားသည်ယင်းကိုပြုလုပ်သူအတွက်မှန်ကန်နိုင်သည်။ ဒါဟာအခြားအဘို့စစ်မှန်တဲ့မကျမည်အကြောင်းတည်း။ ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်မိမိ၏စာပေးစာယူကိုရှာရမည်။
စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အရာဝတ္ထုသည်မည်သည့်အရာဝတ္ထုများသည်မည်သည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်နေပြီးမည်သည့်အရာကခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်နေသည်ဖြစ်စေမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမသိနိုင်တော့ပါ။ အကြောင်းအရာကိုလူသိများသည်အထိစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည်။ ကြယ်တာရာကြယ်စုများ၊ အာကာသအတွင်းရှိနဗ်ကြောများနှင့်ကိုက်ညီသောအရာသည်လူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ plexuses၊ အာရုံကြော ganglia၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဤအစုအဝေးများသို့မဟုတ်ဖြတ်ကျော်ခြင်းများသည်အလင်း၊ အာရုံကြော aura ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ကောင်းကင်၌၎င်းကိုကြယ်တို့၏အလင်းဟုလည်းကောင်း၊ အခြားအမည်များဖြင့်လည်းကောင်းခေါ်ဆိုထားသည်။ ၎င်းသည်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အတွက်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ်ကောင်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်းနဗ်ကြောစင်များနှင့်၎င်းတို့၏စီးဆင်းမှုများ၏သဘောသဘာဝကိုသူသိသည်အထိသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်စဉ်းစားပါကသူ၏နက္ခတ္တဗေဒနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏သီအိုရီကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သူသည်ကောင်းကင်ရှိကြယ်များအကြောင်းကိုသိပြီးသူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဗဟိုများအဖြစ်နေရာချထားနိုင်လိမ့်မည်။
အဘယ်အရာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကိုဆိုလိုသနည်း ဒါဟာလူသားရဲ့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်အစွမ်းသတ္တိ၏ equilibrium ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ဘယ်လိုချိန်ခွင်လျှာထိန်းသိမ်းထားသလဲ?
ကျန်းမာရေးသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ကျန်းမာရေးသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်သို့မဟုတ် ၄ င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုချို့ယွင်းခြင်းမရှိဘဲ၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အလုပ်တွင်လုပ်ဆောင်သည်။ ကျန်းမာရေး၏ရလဒ်အဖြစ်ခွန်အားဖွံ့ဖြိုးပြီးထိန်းသိမ်းထားသည်။ ခွန်အားသည်ကျန်းမာရေး မှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါ။ ခွန်အားနှင့်စွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည်လူသား၏စိတ်နှင့် ၀ ိညာဉ်သဘောသဘာဝ၊ သူ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သာမကသာမန်တိရိစ္ဆာန်လူသားနှင့်ပါသက်ဆိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရှိသကဲ့သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာကျန်းမာရေးရှိပါတယ်။ ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုစီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့်တစ်ခုလုံး၏ကောင်းကျိုးအတွက်၎င်းအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါတစ်ခုလုံး၏ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ စည်းမျဉ်းကိုအလွယ်တကူနားလည်သော်လည်းလိုက်နာရန်ခက်ခဲသည်။ ကျန်းမာရေးကိုရရှိရန်နှင့်သူရရှိရန်အကောင်းဆုံးသိသမျှကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုပြုလုပ်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့်ကျန်းမာရေးကိုရရှိသည်။